SomaliTalk.com » Shirka Jigjiga: Dhaqan Liinbaxay mise Dhimir dhalan Rogan
Cabdi Gorod wuxuu ahaa Gabayaa midho culus Gayiga Soomaali Galbeed “Ogaden” idayl ahaantiina magac iyo maamuus wayn ku leh. Isaga oo la fakaloolsan hadba xaajo aan Oday ka soo gaadh ahayn (Xaajo-Ugub), ayaa maskaxda Gabayaagan waxaa ka soomaxay xigmad guun ah Gayiga Soomaalida na aad ugu baahday. Waxaa kamid ahaa tuducyadan hoos ku xusan sida:
Dunida maanta waxaa lagu sheegaa in ay tahay Carro-edagayn (Globalization) ka duwan midi doraad. Sidan oo ka dhigan in Adduunkii noqday mid hal Massale ku fadhiya. Ciqaab iyo Gabood fal loo gaysto Aadamaha ama Dhaqankiisa meel saraynta sharciga ay ka sayid-calays doonitaanka shakhsigu, waxaa nasiib loo helay in meelo kale laga furo saraynta sharciga. Tusaale, dadka Reer Rwanda, DR Congo iyo Central Africa Republic Gabood falkii ku habsaday 1990s, Dhibaneyaashii maalintaas waxay xaq u haleen in ay ‘Tixraac Togan’ ka helaan wixii fool xumo ahaa ee loo gaystay. Halka kuwii gabood falka gaystay xaar mas Cadaalada Caalamiga baafin ugu jirto noqdeen. Haddaba, waxaa hubanti ah in Doolaal Aadan Dhagoole iyo Sh. Ibraahim Dheere oo iska lahaa fikirka curinta Shirka Jigjiga maalin maalmaha kamid Jiilka soo socdaa ka fikiri doono sidii ay ula tiigsan lahaayeen cadaalada iyaga oo ku sifayn doono soo hindisida Gabood fal-dhaqmeed.
“Itoobiya waxay doonaysaa Shacab Soomaaliyeed, balse ma doonayso Dawlad Soomaaliyeed” Taasi wa siyaasadda Itoobiya
Wq: Bashiir Mahad